Bhuku Rekutanga reMadzimambo 6:1-38
Soromoni anovaka temberi (1-38)
Imba yemukati (19-22)
Mifananidzo yakatemererwa, madhoo, chivanze chemukati (29-36)
Temberi inopera kuvakwa mumakore anenge 7 (37, 38)
6 Mugore rechi480 kubva pakabuda vaIsraeri* munyika yeIjipiti,+ mugore rechina kubva pakatanga Soromoni kutonga Israeri, mumwedzi waZivhi*+ (kureva mwedzi wechipiri), Soromoni akatanga kuvaka imba yaJehovha.*+ 2 Imba yakavakirwa Jehovha naMambo Soromoni yaiva yakareba makubhiti* 60, yakafara makubhiti 20, uye yakakwirira makubhiti+ 30. 3 Vharanda+ raiva pamberi petemberi* raiva rakareba makubhiti 20, rakaenzana nekufara kweimba yacho. Raibuda nemakubhiti 10 kubva pamberi peimba yacho. 4 Akagadzirira imba yacho mahwindo aiva nemafuremu aienda achiita madiki.+ 5 Akavakawo mudhuri waienda uchitevedza madziro eimba yacho uri nechepadivi; waipoterera madziro eimba yacho, kureva madziro etemberi* neimba yemukati,+ uye akagadzira mikoto yaiva pakati pemudhuri wacho neimba yacho, akaikamura-kamura kuita dzimba.+ 6 Mukoto wepasi waiva wakafara makubhiti 5, mukoto wepakati wakanga wakafara makubhiti 6, uye wepamusoro waiva wakafara makubhiti 7, nekuti akavaka achigadzira pekugadzikira matanda achipoteredza imba yacho, kuti vasazoboora madziro eimba yacho.+ 7 Imba yacho yakavakwa nematombo akacherwa akanga atogadzirwa,+ zvekuti hapana sando kana demo kana mumwe mudziyo wesimbi wainzwika muimba yacho payaivakwa. 8 Suo rekupinda naro mumukoto wepasi raiva kudivi rekumaodzanyemba* reimba yacho,+ uye paiva nemasitepisi aimonereka achikwidza kuenda kumukoto wepakati, uye kubva pane wepakati kuenda kune wechitatu. 9 Akaramba achivaka imba yacho kusvika aipedza;+ akaiisa denga rematanda emusidhari iro raakawaridzawo mapuranga emusidhari.+ 10 Akagadzira mikoto yaipoterera imba yacho yese,+ mumwe nemumwe wakakwirira makubhiti mashanu, uye matanda emusidhari aibatanidza mudhuri neimba yacho. 11 Munguva iyi, shoko raJehovha rakasvika kuna Soromoni, richiti: 12 “Panyaya yeimba iyi yauri kuvaka, kana ukafamba mumirau yangu woita maererano nemitongo yangu, wochengeta mirayiro yangu yese uchifamba mairi,+ ndichakuitirawo zvandakavimbisa baba vako Dhavhidhi,+ 13 ndichagara pakati pevaIsraeri,+ uye handizosiyi vanhu vangu vaIsraeri.”+ 14 Soromoni akaramba achivaka imba yacho kuti aipedze. 15 Akanamirira mapuranga emusidhari pamadziro ese emukati eimba yacho. Akanamirira mapuranga pamadziro acho emukati, kubva pasi kusvika pamapango esirin’i, uye pasi akanamirira mapuranga emujunipa.+ 16 Mukati meimba yacho,+ nechekumashure kwayo, akavaka kamuri raiva nemakubhiti 20 achishandisa mapuranga emusidhari, kubva pasi kusvika pamapango edenga, uye kamuri racho ndiro raiva Nzvimbo Tsvenetsvene.+ 17 Uye temberi* yacho+ (kureva chikamu chekumberi cheimba yacho) yaiva makubhiti 40. 18 Mapuranga emusidhari emukati meimba yacho akanga akatemererwa mifananidzo yemichero yakaita semanwiwa madiki+ nemaruva akatumbuka.+ Zvese zvaiva zvemusidhari; hapana dombo raioneka. 19 Akagadzira imba yemukati+ muimba yacho kuti aise areka yesungano yaJehovha imomo.+ 20 Imba yemukati yaiva yakareba makubhiti 20, yakafara makubhiti 20, yakakwirira makubhiti 20;+ uye akaiisa goridhe rakanatswa kumativi ayo ese; uye akaisa atari yacho yese+ mapuranga emusidhari. 21 Soromoni akanamirira goridhe rakanatswa mukati meimba yacho yese,+ uye akasungirira cheni dzegoridhe dzichipfuura nepamberi peimba yemukati,+ iyo yakanga yakaiswa goridhe kumativi ayo ese. 22 Imba yese akaiisa goridhe; uyewo atari, iyo yaiva pedyo neimba yemukati, akaiisawo goridhe.+ 23 Muimba yemukati akagadzira makerubhi maviri+ achishandisa matanda emupaini,* rimwe nerimwe rakareba makubhiti+ 10. 24 Bapiro rimwe chete rekerubhi raiva rakareba makubhiti mashanu, rimwe racho rakareba makubhiti mashanu. Kubva paiperera rimwe bapiro kusvika paiperera rimwe bapiro racho, pakanga paine makubhiti 10. 25 Kerubhi rechipiri raivawo makubhiti 10. Makerubhi acho ari maviri aiva akakura zvakafanana, aine chimiro chakafanana. 26 Kerubhi rimwe chete rakanga rakareba makubhiti 10, uye ndizvo zvakanga zvakaita rimwe racho. 27 Akabva aisa makerubhi acho+ muimba yemukati.* Mapapiro emakerubhi acho akanga akavhurika zvekuti bapiro rerimwe kerubhi raisvika kumadziro, bapiro rerimwe kerubhi richisvika kumadziro ekune rimwe divi, uye mapapiro awo aitambanuka kunosvika nechepakati peimba yacho, zvekuti mapapiro acho akanga akagumana. 28 Akaisa goridhe pamakerubhi acho. 29 Pamadziro acho ese emuimba yemukati neemuimba yekunze* akatemerera mifananidzo yemakerubhi,+ yemiti yemichindwe,+ neyemaruva akatumbuka.+ 30 Akanamirira goridhe pasi muimba yacho yese, muimba yemukati neimba yekunze. 31 Uye pasuo reimba yemukati akagadzira madhoo emuti wemupaini, mbiru dzemumativi, nemagwatidziro,* sechikamu chechishanu.* 32 Madhoo acho maviri aiva emapuranga emupaini, uye akaatemerera mifananidzo yemakerubhi, neyemiti yemichindwe, neyemaruva akatumbuka, akaaisa goridhe; akaisawo goridhe pamakerubhi acho nepamiti yemichindwe. 33 Ndiwo magadziriro aakaita magwatidziro emapuranga emupaini pasuo retemberi,* ari echikamu chechina.* 34 Akagadzirawo madhoo maviri emujunipa. Dhoo rimwe chete raiva nezvipenga zviviri zvaitenderera pamahinji, uye rimwe racho raiva nezvipenga zviviri zvaitenderera pamahinji.+ 35 Akatemerera mifananidzo yemakerubhi, yemiti yemichindwe, neyemaruva akatumbuka, akaisa goridhe pamifananidzo yacho. 36 Akavaka madziro aipoteredza chivanze chemukati+ ayo aiva nemitsara mitatu yematombo akavezwa nemutsara wematanda emusidhari.+ 37 Faundesheni yeimba yaJehovha yakavakwa mugore rechina, mumwedzi waZivhi;*+ 38 uye mugore rechi11, mumwedzi waBhuri* (kureva mwedzi wechi8), imba yacho yakapera nezvese zvaifanira kuitwa pairi, maererano nepurani yayo.+ Saka akaita makore 7 achiivaka.
^ Ona Mashoko Ekuwedzera B8.
^ ChiHeb., “petemberi yeimba.”
^ ChiHeb., “rekurudyi.”
^ Kureva, Nzvimbo Tsvene, iyo yaiva pamberi peNzvimbo Tsvenetsvene.
^ ChiHeb., “matanda emafuta,” zvichida pari kurehwa mupaini unonzi Aleppo.
^ Kureva, Nzvimbo Tsvenetsvene.
^ ChiHeb., “mukati nekunze.”
^ Panogona kunge pachitaura nezvekugadzirwa kwemagwatidziro kana kuti kukura kwemasuo acho.